Forum serasera malagasy Ahoana ny ahafahantsika mahita kintana 15 miliara années-lumière miala avy aty raha aman'arivo taona izao tontolo izao ? - Dinika forum.serasera.org
Ahoana ny ahafahantsika mahita kintana 15 miliara années-lumière miala avy aty raha aman'arivo taona izao tontolo izao ?
Fitohizan'ny hafatra : Ahoana ny ahafahantsika mahita kintana 15 miliara années-lumière miala avy aty raha aman'arivo taona izao tontolo izao ?
Nehemiah - 17/05/2013 08:25
Misy galaksia sasany izay années-lumière aman-tapitrisany miala avy aty no misy azy ireo. Raha 1 année-lumière ny distance vitan'ny hazavàna ao anatin'ny herintaona, ary raha 15 tapitrisa années-lumière miala avy aty no misy ny galaksia sasany, midika ve izany fa 15 miliara taona farafahakeliny izao tontolo izao ?
Na dia ao aza ny porofo maro dia maro, na ara-Baiboly na ara-tsiansa, fa aman'arivo taona izao tontolo izao, nampanahy ny olona mandritry ny fotoana ela be izay fanontaniana izay. Kanefa, na izany na tsy izany, tokony tsaroantsika mandrakariva fa hiteraka fanontaniana mendri-pikarohana foana ny fiheverana rehetra momba ny fiandohan'izao tontolo izao. Tsy ho tanteraka mihitsy ny fahalalantsika ka hisy zavatra hianarantsika foana.
Misy olana koa anie ny resaka Big Bang
Ny Big Bang no teôria momba ny fiandohan'izao tontolo izao tena lalain'ny olona tsy mino an'Andriamanitra fatratra. Kanefa tokony fantatsika fa manana ny olany manokana momba ny hafaingan'ny fahazavàna ity teôria ity, izay antsoina hoe "olan'ny faravodilanitra". Ny olana dia eritreretina ho midadasika im-10 heny nohon'ny distance vitan'ny hazavàna hatr@ Big Bang mandrak'ankehitriny izao tontolo izao, na dia heverin'ny tsi-mpino ho amana miliara taona aza ilay izy.
Ny zavatra lazain'ny teôrian'ny Big Bang dia nipoitra avy t@ boule de feu kely balitika ny matière rehetra @'izao tontolo izao. Tsy nitovy ny fiparitahan'ny hafanana ao anatin'ilay boule de feu, raha tsy izay dia tsy niforona mihitsy ny galaksia mandritry ny fivelaran'izao tontolo izao taorian'ny fipoahana voalohany. Kanefa misy rayonnement de fond avy @ toerana rehetra eran'izao tontolo izao, izay 3° K (izany hoe 3° C ambonin'ny 0 absolu) na aiza na aiza no refesina ilay izy. 1 no ho 100 000 ny fiova mba hita @'ity rayonnement de fond ity. Kanefa @ fomba ahoana ary no mety hisian'izao zava-misy izao raha tsy mbola nanam-potoana ho tody hatr@ faran'izao tontolo izao ny hafanàna mba hifindra avy @ toerana mafàna ka hatr@ toerana mangatsiaka ka hanjary mitovy @ toerana rehetra ?
Lasa nametraka petrakevitra mifototra @ honohono ny sasany, tahaky ny "inflation" haingana nohon'ny hazavàna, kanefa tsy misy fizotra fantatra ankehitriny afaka manomboka na mampijanona an'izao @ fomba mifarana (azo lazaina fa fahagagàna naturaliste izany ). Misy ary ny kôsmôlôjista mpandala ny teôrian'ny Big Bang sasany milaza fa haingana lavitra nohon'ny ankehitriny ny hafaingan'ny hazavàna t@ lasa. Ka ny tiana ahatongavana eto dia tsy antony anilihana ny fitantaran'ny Baiboly ity resaka ity satria manana olana mitovy karazana @'izany koa ny mpandala ny Big Bang.
Noforonina teo am-pizorany ve ny hazavàna ?
Taona am-polony vitsivitsy izay no nampalaza ny fanazavàna hoe noforonin'Andriamanitra "teo am-pizorany" ny hazavàna, @'izay tonga dia afaka mahita ny kintana i Adama ka tsy mila miandry mandritry ny taona an'arivony mba hahita na dia ny kintana akaiky indrindra aza. Tsy hoe asiako fetrany ny herin'Andriamanitra, fa miteraka olana goavam-be izany.
Midika mantsy izany fa isaky ny mijery ny zavatra ataon'ny zavatra 1 any alavitra be any dia tsy tena nitranga ny zavatra hitantsika. Ohatra, raha mahita kintana mihodina 1 tapitrisa années-lumière miala avy aty, ny hazavàna miantefa @ téléscope no ahafahantsika mahafantatra an'izay, kanefa izay hazavàna izay dia tsy mba avy @ kintana fa noforonina "eo am-pandehanana".
Ny dikan'izany, raha 10 000 taona izao tontolo izao (ohatra), dia tsy nisy nitranga mihitsy izay rehetra hitantsika ka mihoatra ny 10 000 années-lumière miala avy aty no misy azy.
Ity misy ohatra mba ho azontsika an-tsaina tsara izany : alao sary an-tsaina ny supernova (kintana mipoaka) 100 000 années-lumière miala avy aty ao anatina tontolo 10 000 taona. Rehefa mijery ny fipoahan'ity kintana ity ny mpahaikintana (astronome) 1, tsy hazavàna fotsiny anie no miantefa @ telescope-ny e. Raha hazavàna fotsiny moa no hitany, tsy ho olana ny milaza fa namorona photons be dia be mifampitohy teo am-pizorana. Fa ny zavatra tena hitany dia lamim-piova manokana, tena misongadina, @ hazavàna, izay maneho ny tranga efa nampoizina ho ateraky ny tranga toy izao, miaraka @ neutrinos, ny hazavàna hita maso, ny rayons X, ny rayons gamma... Ohatra, ny neutrinos dia afaka mamakivaky ny matière mivaingana, tena ohatran'ny tsy misy mihitsy ilay matière, fa saingy mihamiadana kely ny hazavàna, ka mirefotra ny neutrinos izay voa hitan'ny masontsika ny supernova.
Ka mibata antontan-kevitra izay manambara tranga toa tena nisy ny neutrinos sy ny hazavàna. Tena marina mihitsy ny mpahaikintana raha mihevitra an'ity "hafatra" ity ho tena izy, ka tena nisy io zavatra io, ary nipoaka manaraka ny lalànan'ny fizika, nihamazava, nandefa rayons X, nihamaizina, sns, araky ny lalànan'ny fizika ihany koa.
Mifanaraka @'izay tsara mihitsy izay rehetra hitan'ny mpahaikintana, na dia ny lamy spectral @ hazavàna avy @ kintana izay ahazoana "signature chimique" azo ahafantarana ny akora simika tao anatin'ilay kintana. Fa raha voaforona "teo am-pandehanana" ny hazavàna avy @'ilay kintana, voarakitra ao anatiny hatr@ namoronana azy ity hafatra raketiny ary ampitainy eran'ny habakabaka ity, na napetraka tao anatiny avy eo, fa tsy mba avy @'ilay toerana any alavitra be any ilay izy.
Inona fotsiny no tanjon'Andriamanitra raha namorona hafatra manokana ao anatin'ny hazavàna miantefa @ Tany izay toa tena nateraky ny tranga maromaro nifanesisesy nefa tsy marina akory izany ? Izany anie die mitovy @ milaza fa namorona ny fôsily ambany tany mba hamitaka antsika na hizaha ny toetrantsika Andriamanitra, kanefa tsy mitandindona inona na inona tena izy (zavamananaina tena nivelona sy maty t@ lasa) izy ireo e. Somary mahagaga raha hamitaka antsika tahak'izao ilay Avo Indrindra masina indrindra.
Tsy niova mihitsy ve ny hafaingan'ny hazavàna t@ lasa ?
Izay vahaolana izay no tonga @ eritrerintsika voalohany : haingana kokoa ny hazavàna t@ lasa, ka afaka mahatody toerana lavitra kokoa ao anatin'ny fotoana fohy kokoa. @ voalohany, hoatran'ny trop facile izay valiny izay. Nampalaza an'ity hevitra ity i Barry Setterfield taona vitsivitsy lasa izay rehefa naneho fa toa manana fironana hihakely tsikelikely ny hazavàna rehefa ampitahaina ny fandinihana momba ny hafaingany izay natao tao anatin'ny 300 taona farany.
Nantsoin'i Setterfield sy i Trevor Norman mpiara-miasa @ hoe "cdk theory" ilay izy. Neverin'izy ireo fa nanova ny vokatry ny fidatiana radiométrique ary mety nahatonga ny "décalage vers le rouge" @ hazavàna avy @ galaksia alavitra be ilay izy, na dia voaporofo ho diso izay hevitra 1 izay taorianan'izay, sady novain'izy ireo koa ny môdely ara-tsiansa noforoniny.
Nokianin'ny olona maro ity teôria ity satria hony milaza ny teôrian'ny relativite noforonin'i Einstein fa tsy afaka miova mihitsy ny hafaingan'ny hazavàna, na dia tsy marim-pototra aza izany, satria milaza fotsiny ny teôrian'ny relativite fa rehefa misy mpandinika mandrefy ny hafaingan'ny hazavàna, tsy hiova mihitsy ilay izy, na inona na inona hafaingan'ny loharanom-pahazavàna na ny mpandinika.
Nirefotra ny adi-hevitra etsy sy eroa, notaritin'olona samy mahay sy manana traikefa, momba ny hoe manohana an'izao teôria izao ny zava-misy @ lafiny statistika ve sa tsia ?
Ny tena olana aloha dia ny vokatra ara-pizikan'ity teôria ity. Raha nihamiadana ny hazavàna, araky ny filazan'i Setterfield, dia tokony mbola hita @ hazavana avy @ galaksia alavitra be ny vokany, nefa hoatran'ny tsy hita ilay izy. Nanaovana fanandramana miaraka @ précision avo lenta be ny teôrian'ny relativite ankapoben'i Einstein, tao anatin'ny galaksiantsika. Étoiles à neutrons 2 miara-miodina, ary pulsar ny 1 @'izy ireo, no nentina anaovana an'izay fanandramana izay, ary mitovy @ hafaingan'ny hazavàna refesina ety ambony tany ny hafaingan'ny hazavàna norefesina avy any.
[Nanamarika ny mpahay fizika mpandala ny fahariana fa mifandanja @ hafaingan'ny hazavàna ny tahan'ny fahaverezan'ny angovo ao anatin'ny pulsar 1 nohon'ny radiation gravitationnelle raha ny teôrian'ny relativite ankapobeny no arahina. Natolotra an'i Russell Hulse sy Joseph Taylor ny amboara Nobel nohon'ny nahitan'izy ireo pulsar binaire (izany hoe pulsar miara-miodina @ étoile à neutrons hafa) ary ny nanehoany fa mifandraika @ fanampoizin'ny relativite ankapobeny miaraka @ marge 0,4%. Kanefa manambara izany fa tsy niova mihitsy tao anatin'ny taona an'arivony hatr@ niaingan'ny hazavàna avy @ pulsar.]
Raha tsorina izany dia tsy nisy nahay namaly ny tsikera rehetra niantefa t@'ity teôria ity ny mpiaro azy. Mahavariana fa naniratsira ny cdk theory ny mpomba ny Big Bang, hatr@ nandrosoan'ny 1 @'izy ireo, izay miantso hoe João Magueijo, hevitra mitovitovy an'izay mba hanafaka ny teôrian'ny Big Bang @ olany manokana .
Kôsmôlôjia vaovao ho an'ny mpandala ny fahariana
Soa ihany fa nahatonga ny olona hisaina mafy momba an'ity resaka ity ny cdk theory. Nilaza ny mpahay fizika mpandela famoronana Dr Russell Humphreys fa niasa mandritry ny 1 taona tsy tapaka mba hampitombina ny cdk theory fa tsy nahomby. Nefa kosa, nanjary nanana hevitra hanorina kôsmôlôjia vaovao izay toa mahavaly ny olana toa ateraky ny fampianarana mazavan'ny Baiboly hoe voa haingana no noforonina izao tontolo izao. Natolotra ho alternative ho an'ny teôrian'ny Big Bang izy ity.
Tsara ho an'ny siansa ny tranga tahak'izao, izay ahitàna teôria mandala ny fahariana 1 manoatra teôria hafa(izany hoe ny cdk theory). Tsy azo anaovana marimaritra iraisana ny fitantaran'ny Baiboly, satria avy @ Mpahary, ary mifanohitra @ fomba fijery sy môdely miovaovan'ny olona mety diso izay mitady ny hahazo ny zava-misy ao anatin'ity cadre ity (satria tadidio fa ny mpandala evôlisiona koa dia manovaova ny heviny momba ny hoe @ fomba ahoana no nipoiran'ny zava-drehetra ho azy, fa tsy hiova hevitra mihitsy @ hoe nipoitra ho azy tokoa ve ny zava-drehetra raha mbola mpandala evôlisiona izy ireo).
Homeko famantarana kely eto momba ny hoe @ fomba ahoana no amahan'ity kôsmôlôjia vaovao ity ny resaka hazavàna avy @ kintana. Hevero fa ny fotoana hizoran'ny zavatra 1 @ distance 1 manokana dia io distance io divisé-na @ hafaingany :
Fotoana = Distance/hafaingana
Rehefa ampiharina @ hazavàna avy @ kintana alavitra ity équation ity dia taona amana miliara no vokany. Nitady hi-remettre en question ny distance ny sasany, fa angamba vahaolana tsy dia mitombina loatra izany.
[@ miliara miliara ny kintana, ary maro dia maro ny @'ireny no mitovy @ masoandrontsika rehefa dinihina ny hazavàna avy @. Tsy maintsy miparitaka ao anatina erana goavana dia goavana ireo kintana ireo, raha tsy izay dia masaka ara-bakiteny isika.]
Maro ny tetika ampiasain'ny mpahaikintana mba hamantarana ny halavirana, ka tsy misy mpahaikintana mandala ny famoronana mahay ny raharahany hilaza fa goavana be ny hadisoana @ kajin'ny mpiara-miasa ka afaka ahena ho années-lumière an'arivony ny miliarana années-lumière. Na dia ny Voie Lactée misy antsika dia 100 000 années-lumière ny halavany !
Raha tsy niova ny hafaingan'ny hazavàna, ny fotoana sisa no azo ovaina @ équation. Raha ny marina dia efa taona amam-polony no nilazan'ny teôrian'ny relativiten'i Einstein fa zavatra tsy absolu ny fotoana. Mety mbola tsy fantatry ny manam-pahaizana ny antsipirian'ny mombamomba ny fotoana, fa hainy kosa ny mandrefy azy. Ankehitriny, afaka mandrefy ny fikorian'ny fotoana @ fomba tena précis be mihitsy ny famantaranandro atômika ary tsikaritra fa miovaova arakaraky ny toerana ilay izy.
Raha ny marina dia zavatra 2 no tsikaritra fa manova ny fikorian'ny fotoana : ny hafaingana sy ny gravite. Ny teôrian'ny relativite ankapoben'i Einstein no teôrian'ny gravite tsara indrindra ananantsika hatr@'izao, ary milaza ilay izy fa manafolaka ny fotoana ny gravite.
Norefesina imbetsaka t@ alalan'ny fanandramana ity zava-misy ity. Ny famantaranandro any @ tampon'ny gratte-ciel 1, izay ahitàna gravite somary kelikely kokoa, dia miadakadana kely fotsiny nohon'ny famantaranandro any ambodiny, araky ny faminanian'ny relativite ankapobeny.
[Ilaina ny relativite ankapobeny @ fizikan'ny fotoana, zavatra azo porofoina izany, ary azo atao koa ny mampisaraka azy @ bagage philosophique izay napetraky ny sasany @ fomba tsy marim-pototra t@ ary notoherin'ny kristiana sasany izay nieritreritra fa manjary mampirona @ relativisme ara-pitondran-tena ny relativite @ resaka fizika.]
Rehefa tena mitangorona be mihitsy ny matière (tahaky ny @ trou noir), henjana dia henjana ny famolahan'ny gravite, ka na dia ny hazavàna dia tsy afa-bela. Milaza ny équations-n'ny relativite ankapobeny fa tena mijanona ny fotoana (araky ny fahitan'ny olona alavitra) any @ faritra tsy hita maso izay manodidina an'ity tangorona matière ity (horizon des évènements, na event horizon no fiantsoana azy, izany hoe ny toerana izay iverenan'ny hazavàna izay mitady hiala @ sintona gravitationnelle mankany @ trou noir).
Mampiasa petrakevitra hafa...
"Mi-tomber" anatin'ny équations-n'ny teôrian'ny relativite ankapobeny ny kôsmôlôjia vaovaon'i Dr Humphreys, raha heverina fa misy sisiny ary misy afovoany tokana izao tontolo izao (izany hoe, raha mamakivaky an'izao tontolo izao anaty sambon-danitra ianao dia tsy maintsy tody @ toerana izay tsy ahitàna erana na fotoana na matière any ankoatra). Ao anatin'ity kôsmôlôjia ity, akaikin'ny afovoany ny Tany (ary izay koa no zavatra toa tsikaritry ny olona mijery ny habakabaka).
Toa mazava ho azy izao, kanefa mandà an'izay ny kôsmôlôjian'ny mpandà an'Andriamanitra rehetra ankehitriny. Izany hoe, mitompo teny fantatra izy ireo (na dia tsy hita izay ilàna ny anaovana an'izay @ lafiny ara-tsiansa) fa tsy misy sisiny ary tsy misy afovoany izao tontolo izao. Izay no atao hoe "principe cosmologique". Ao anatin'ity tontolo itompoana teny fantatra ity, ny galaksia rehetra dia voahodidin'ny galaksia hafa izay miparitaka @ fomba mifarana @ directions rehetra ka nohon'izay dia mifamono ny sintona gravitationnels tsy négligeables rehetra.
Petrakevitra filôzôfika, eny, tena ara-pinoana mihitsy, ity petrakevitra ity. Natao indrindra mba anesorana ny Tany @ toerany toa privilégiée akaikin'ny afovoan'izao tontolo izao ilay izy (satria izay no ampianarin'ny Baiboly : ny Tany no centre-n'ny asan'i Jehovah t@'Izy namorona an'izao tontolo izao). Izao tsara no lazain'i George Ellis, izay mpahay kôsmôlôjia hajaina fatratra :
Tokony azon'ny olona an-tsaina fa misy môdely maro be azo anazavàna ny zavatra hita. Ohatra, afaka manamboatra tontolo boribory ary symétrique, miaraka @ Tany @ afovoany, ary tsy ho afaka handiso an'ity teôria ity ianareo raha mifototra @ zavatra hita.
Namoaka taratasy momba an'izay i Ellis :
@ lafiny filôzôfika ihany no ahafahan'ny olona manilika an'izay. Raha ny fahitako azy dia tsy misy maharatsy an'izay mihitsy. Ny tiako abaribary fotsiny dia mampiasa mari-pitsaràna filôzôfika izahay rehefa mifidy ny môdelinay. Betsaka ny kôsmôlôjia izay mitady hanafina an'izay.
Ka azo atao ny manana an'izany fijery izany momba an'izao tontolo izao, sady mifanaraka lavitra kokoa @ zava-misy nohon'ny tontolo tsy misy afovoany, tsy misy sisiny, ahizingizin'ny mpandà an'Andriamanitra. Misy porofo faran'izay mahery ankehitriny fa misy afovoany izao tontolo izao. Ohatra, polarisé @ direction manokana ny hazavàna avy @ quasars, ny galaksia koa dia mirona @ direction-na filaharana manokana, ary misokajy @ andia samihafa ny décalages vers le rouge asehon'ny galaksia. Ny hazavàna misokajy avy @ galaksia dia manambara fa angamba mitambatra @ cercles concentriques mifanalavitra 1 000 000 années-lumière izy ireo, ary ny Tany no ampovoany. Ny ankevikevin'ny isian'ny Tany @'ity toerana privilégié ity ao anatin'ny fiandohan'izao tontolo izao mandala ny natoraly dia latsaky ny 1 no ho 1 000 000 000 000. Tsy mifanaraka @ tontolo nipoitra t@ fomba kisendrasendra, tsy misy sisiny ary tsy misy afovoany ireo zava-misy ireo, fa mifanaraka @ tontolo voalahatr'i Andriananahary.
Mbola maro ny olan'ny Big Bang, tena miantso fanamboarana ny teôria mihitsy ny manam-pahaizana mandà an'Andriamanitra sasany :
Mihamaro hatrany ny petrakevitra (zavatra mbola tsy hitan'ny masontsika mihitsy) ifotoran'ny teôrian'ny Big Bang. Inflation e, matière noire e, énergie noire e, ireny no voalohany. Raha tsy nisy an'ireny dia ho fara-vonon'ity teôria ity mihitsy ny fifanoheran'ny faminaniany @ zava-misy hitan'ny mpahaikintana.
Araky ny relativite ankapobeny, raha misy sisiny sy afovoany izao tontolo izao, tokony hisy sintona gravitationnel tsy négligeable mankany @ afovoany. Raha heverina ho etsy afovoany ny Tany dia tokony hihodina malaky kokoa nohon'ny famantaranandro any @ sisin'izao tontolo izao ny famantaranandro ety ambony tany. Ny dikan'izay dia tsy ampy intsony ny milaza fa noforonina tao anatin'ny 6 andro izao tontolo izao. 6 andro @ famantaranandro aiza kay ? (Raha milaza isika hoe "@ fotoanan'Andriamanitra" dia adinontsika fa Izy ihany no namorona ny fikorian'ny fotoana araky ny fahatsiarovantsika ; ivelan'ny fotoana Izy, ary mahita ny farany hatr@ voalohany. Gen. 1:1, Mpit. 3:11), Is. 26:4, Rom. 1:20, 1 Tim. 1:17., Heb. 11:3. Mahavariana fa milaza ny relativite ankapobeny fa tsy misy ny fotoana raha tsy misy ny matière).
Hoatran'ny manaporofo ny fielezan'izao tontolo izao t@ lasa ny zava-misy, ary mifandraika @ fehezanteny maro azon'ny mpanoratra ny Baiboly avy t@ tsindrimandrin'Andriamanitra milaza fa namelatra ny lanitra Andriamanitra (oh. Is. 42:5, Jer. 10:12, Zak. 12:1).
Raha tsy dia ngeza loatra nohon'ny hitantsika izao tontolo izao, ary raha ataontsika hoe kely in-50 heny nohon'ny androany ilay izy, azo heverina @ alalan'ny tsoa-kevitra ara-tsiansa avy @ relativite ankapobeny fa niely avy t@ état taloha ilay izy, ary voahodidina horizon des évènements ilay izy t@'izany ("trou blanc" no terme technique ahalalàna azy, izany hoe trou noir mivadika. Tsy mifanohitra @ équations-n'ny relativite ankapobeny izay).
Rehefa niampita an'ity horizon des évènements ity ny matière, araky ny teôrian'i Humphreys, lasa nihakely ny horizon des évènements ka nanjary tsy misy intsony. Midika izany fa nifanindry t@ velaran'ny Tany t@ fotoana anankiray ilay izy. @'izany fotoana izany, nijanona tanteraka ny fotoana ety ambony Tany (raha ampitahaina @ toerana hafa mifanalavitra be @). Raha ataontsika hoe nisy olona tety ambony Tany t@'izany, tsy nahatsiaro inona na inona mihitsy izy t@'izany fotoana izany, ka nisy "miliara taona" nahafahan'ny hazavàna avy @ kintana any alavitra any ho tody ety ambony tany (ao anatin'ny référentiel hiampitan'ilay izy ny habakabaka 1 manontolo, fa tsy ny référentiel-n'ny ety ambony Tany) ary nahafahan'ny kintana hihantitra, kanefa tsy ampy 1 andro ny nitrangan'izany raha avy ety ambony Tany no jerena. Nilaza i Humphreys fa hevitra tsy azo ihodivirana @ lafiny ara-tsiansa ny dilatation gravitationnelle goavam-ben'ny fotoana raha niely @ fomba tsy négligeable avy t@ état taloha mibolobolo kokoa izao tontolo izao.
Raha tsorina, raha ataontsika hoe nisy olona nijery ny habakabaka t@'izay fotoana izay indrindra, hoatran'ny hoe lasa haingana dia haingana nohon'ny 300 000 km/s ny hafaingan'ny hazavàna @, ary hoatran'ny hoe lasa miodina malaky be tampoka ny galaksia. Fa raha nisy olona teny @ habakabaka teny ka nandrefy ny hafaingan'ny hazavàna tany @ dia mbola 300 000 km/s ihany no norefesiny.
Soa ihany fa tsy ny mpandala ny fahariana no namorona hevitra tahaky ny famolahan'ny gravite ny fotoana, ny trous noirs sy ny trous blancs, ny horizons des évènements sns fa raha tsy izay dia manjary noendrikendrena ho mamotsipotsika ny zava-misy na mamoromporona angano mba hamaha an'ity olana ity izahay. Ny mahatsara ny kôsmôlôjian'i Humphreys dia mifototra @ matematika sy fizika eken'ny mpahay kôsmôlôjia rehetra (relativite ankapobeny), ary miaiky (miaraka @ ankabeazan'ny mpahay fizika) fa niely izao tontolo izao t@ lasa. "Mi-tomber" tsara ny vokany raha tsipahina ilay point de départ mandidy tsy manapaka ampiasain'ny mpandala ny Big Bang (ilay hevitry ny tontolo tsy misy sisiny, izay azo lazaina fa "tsiambara3-n'ny manam-pahaizana mandala ny Big Bang").
Hoatran'ny mahazava ny ankamaroan'ny zavatra hitan'ny manam-pahaizana izay ampiasainy anohanana ny Big Bang ka tsy manao marimaritra iraisana @ zava-misy na @ fitantaran'ny Baiboly milaza fa tanora ny Tany ity kôsmôlôjia ity.
Mahavaha ny olana momba ny hazavàna avy @ kintana ilay kôsmôlôjia vaovao
Ny teôria rehetra izay amboarin'ny olombelona mety diso, na dia mifandraika @ zava-misy toy inona aza, dia tsy maintsy amboarina na ahilika foana raha misy fahitàna vaovao izay mifanohitra @. Tsy manome habetsakana dilatation temporelle mitombina ny kôsmôlôjian'ny trou blanc, fa kosa mizotra @ bonne direction ilay izy, sady voatohan'ny teôria sy ny zavatra hita ilay izy. Raha ny tena marina dia mifanaraka @ ambangovangon'ny kôsmôlôjia mandala fahariana maro (centre de masse ho an'izao tontolo izao, fielezan'ny erana, dilatation temporelle voa haingana) ny fitomboana hafahafan'ny hafaingan'ny sondes spatiales Pioneer. Tsy nahavita nanazava an'izay zava-misy izay ny mpanohana ny Big Bang.
Nentin'i Dr John Hartnett alavitra kokoa ireo hevitra 3 ireo ary nampidiriny anatin'ny relativite kôsmôlôjika. Notsoahina avy t@ firoboroboan'ny relativite manokana (ny vokatry ny fivezivezena @ fotoana) ho an'ny firafitra ankapoben'izao tontolo izao ilay izy. I Dr Moshe Carmeli no namelabelatra an'izay hevitra izay, fa i Hartnett no naneho fa azo ampiharina @ tontolo misy centre de masse (arak'i Humphreys) koa ilay izy, ary mahazava ny zava-misy koa ilay izy. Asehon'ilay izy koa @ fomba ahoana no hafahantsika mahita ny hazavan'ny kintana alavitra vokatra mivantan'ny namelaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Misy ny dimensions 4 mahazatra antsika (halava, saka, haavo, fotoana) ilay môdely, fa miampy dimension faha-5 ilay izy, dia ny hafaingan'ny fielezan'izao tontolo izao, izay mitovy @ vokatry ny hafaingana @ fotoana @ relativite manokana. Ohatra, mahazava ny firafitry ny galaksia ka tsy mila miantsoantso an'izany "matière noire" izany (petrakevitra latsaka avy any an-danitra ilain'ny teôrian'ny Big Bang) ny môdelin'i Hartnett. Namoaka taratasy ara-tsiansa izay maneho fa mety tokoa ilay dimension fahadimin'i Carmeli izy.
Misy dilatation temporelle koa ilay izy, fa saingy tsy vokatry ny sintona gravitationnelle tsy négligeable ao anatin'ny tontolo misy fetra sy sisiny, fa vokatry ny fihitarana goavam-ben'ny zaitran'ny erana. Tsy dia azo lazaina ho "habaka" loatra ny erana, satria misy angovo be dia be ao anatin'ny habakabaka, ary nahatonga ny erana hivelatra haingana Andriamanitra t@ Famoronana, ka nanjary niodina miadana dia miadana ny famantaranandro tety ambony tany, etsy ampovoan'ny fielezana, raha ampitahaina @ famantaranandro any @ galaksian'ilay tontolo niely.
Ahoana izao raha tsy nisy nieritreritra momba ny possibilité-n'ny dilatation temporelle ? Ho betsaka angamba ny olona nahatsiaro ny tenany ho voatery hiombon-kevitra @'ireny manam-pahaizana (ary misy Kristiana koa miaraka @) milaza fa tsy misy vaha-olana possible, izany hoe zava-misy ny tapitrisa taona tsy tambo isaina satria afaka mahita kintana alavitra be isika, ary tsy maintsy atao "réinterprétation" (izany hoe avadibadika ny heviny) ny Baiboly, na tsipahina tsikelikely ilay izy. Raha ny marina dia maro ny nanainga ny Kristiana hanary ny fampianarana mazavan'ny Baiboly momba ny Famoronana voa haingana satria "zava-misy tsy azo ihodivirana" ireny.
Kanefa raha atao an'izay réinterprétation izay ny Soratra Masina dia midika izany fa antitra ny tany sy ny vato mirakitra fôsily etsy ambanin'ny tongontsika. Midika koa izany (raha eritreretina @ fomba lôjika ilay izy) fa tsy maintsy ekena fa nisy ny fahafatesana sy aretina ary fandatsahan-dra mandritry ny miliara taona talohan'i Adama, ka manjary marefo ny firafitra ara-tantaran'ny Famoronana-Fahalavoana-Famonjena atolotry ny Baiboly, kanefa ao anatin'ity firafitra no misy dikany ny Evanjely, ary naorina teo amboniny ny sivilizasiônantsika, miaraka @ tombon-tsoany maro dia maro.
Tsara tadidiana izany rehefa mandinika momba ny hevitra hafa miteraka olana izay mbola tafajanona ihany na dia maro aza ny porofo manohana ny Famoronana tantarain'ny Genesisy. Andriamanitra irery no manana fahalalàna tsy misy fetra. Raha fotorana @ hoe marina ny tenin'Andriamanitra (fa tsy hoe diso na tsy ilaina) ny fikarohana ara-tsiansantsika, hifandraika lavitra kokoa @ zava-misy ny teôria ara-tsiansa haorintsika @ farany.
Kanefa, na dia tsy nisy aza ireo hevitra vaovao izay toa mahavaha an'ity olona ity aza, hadisoana ny manana an'izao fiheverana izao. Tsy tokony leferina @ fiheveran'ny manam-pahaizana ny fahefan'ny Baiboly. Afaka mamadika an'ilay firafi-dehibe ambony ambany ny zava-misy kely izay mbola tsy fantatra hatrizay, na ny fiovàna @ fiheverana niaingàna, ka manjary tsy zava-misy intsony ny "zava-misy".
Nehemiah - 17/05/2013 08:32
N.B. : nadika avy @ toko faha-5 t@ "Creation Answers Book" niaraha-nosoratan'i Ken Ham, i Dr Carl Wieland, i Dr Don Batten, i Dr David Catchpoole ary i Dr Jonathan Sarfati ity lahatsoratra ity, ka ho hitako eo @'izay raha mba mahita fianarana sy mazoto ara-tsaina ary manana saina mivelatra ny gasy, satria natao ho azon'ny sarambabembahoaka manana bacc ilay boky.
Ka ametrahako fanamby ny namana rehetra aty @ serasera. Izay mahazo tsara ny zavatra voalaza eto dia hiaiky azy ho lahy aho (na dia vehivavy aza lol).
mirananirina - 17/05/2013 14:07
tsssss lava loatra ry Nehemiah a, tsy nisy voavakiko
Nehemiah - 17/05/2013 14:19
Ay, dia fintino ary. Izay le nanaovako hoe mila fahazotoana ara-tsaina ny mamaky azy.